Gbasara Anyị - Dongguan Vanhe Modular House Limited
bụ ọkachamara na Nhazi, Nlụpụta, Azụmaahịa na Nrụpụta nke ụlọ ndị a rụpụtara. N'ịbụ onye guzosiri ike na 2012, Dongguan CITY, na-aga n'ihu na-enwe ọganihu ma ugbu a bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ China na onye na-ahụ maka ọrụ na teknụzụ dị elu na ụlọ eji arụ ọrụ.
Site na ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ikuku na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ, ngwaahịa anyị na-emewanye nke ọma na nke dị iche iche, ọ bụghị naanị na ọ dị mma n'ọdịdị, kamakwa ọ bara uru n'ọtụtụ ebe. Anyị enwetala nkwụnye ego nkwụsị site na imewe, imepụta, ihe owuwu maka ire ahịa.
Ruo ugbu a, VANHE enweela ihe ịga nke ọma na-enye ọtụtụ puku ụlọ arụpụtara ụlọ na ihe karịrị mba 100, gụnyere atụmatụ ụlọikwuu, imewe ụlọ, mmepụta ụlọ ọrụ ụlọ, njem, ntinye saịtị, ịchọ mma ime ụlọ, ogige ndị ọzọ, wdg. VANHE enwetawo nnukwu otuto si ahịa n'ihi na ya magburu onwe ngwaahịa mma, ikenyeneke mbiet ewu technology na enyịn ese mgbe-ire ọrụ. N'ihi ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe bara ụba na nrụpụta ụlọ arụpụtara nke ọma yana nchịkọta nke iwu mba dị iche iche, iwu, omenala, ọdịbendị na ihu igwe nke na-emetụta ọrụ ahụ na-arụ nke ọma, VANHE na-eduga ndị China na-arụ ọrụ ụlọ na-ewu ewu ma bụrụ ndị kachasị amasị ha. a maara nke ọma nnukwu-ọnụ ọgụgụ Chinese Construction Enterprises.
Foto ndị dị n'aka nri bụ ụfọdụ ọrụ anyị rụkọtara ọnụ na ụwa niile n'oge na-adịbeghị anya. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, ị nwere ike pịa iji lee ha
Maka ihe emezuru, VANHE enweghị afọ ojuju. Ọ na-enwe oke ịnụ ọkụ n'obi mgbe niile maka mmụta, na-etinye oke mkpa na atụmatụ mmepe mmepe na mgbanwe yana na-amụta ifịk ifịk mba ụwa, ndị ama ama ama. Site na 2012 rue ugbu a, site na mgbe amụrụ nwa ya ruo taa dị ebube taa, site na mmalite dị egwu na mmepe mmepe, ndị VANHE mere okporo ụzọ pụrụ iche na mmepe na mmepe. Mana iguzosi ike n'ezi ihe ga-abụ ezigbo obi eziokwu nye ndị ahịa. Ọzọkwa, ọ bụ mkpụrụ obi nke ụlọ ọrụ ahụ.
Afọ asatọ nke nkwekọ na-ewulite alaeze na narị afọ nke iguzosi ike n'ezi ihe na-egosipụta ịdị mma. VANHE, onye na-ebu ụgbọ elu nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na China, ga-anọgide na-eduzi mmepe ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma dee isi ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.